ဖက္တီးမ အပ်င္းအိုးမေလးေတြ အိပ္ေနရင္းနဲ႔ ၀ိတ္ခ်လို႔ရတယ္ေနာ္..။ - APANNPYAY
/ ဖက္တီးမ အပ်င္းအိုးမေလးေတြ အိပ္ေနရင္းနဲ႔ ၀ိတ္ခ်လို႔ရတယ္ေနာ္..။
ဖက္တီးမ အပ်င္းအိုးမေလးေတြ အိပ္ေနရင္းနဲ႔ ၀ိတ္ခ်လို႔ရတယ္ေနာ္..။
မိန်းကလေးတွေအတွက် ဝိတ်ချဖို့အတွက်ဆိုရင် အမြဲဆိုသလို ကြုံနေရတဲ့ ပြသာနာတခုပေါ့။
ဒီတခေါက်တော့ အိပ်နေရင်းနဲ့ ဝိတ်ကျမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ဝိတ်ချနည်းဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။
? တကယ်တော့ အိပ်နေရင်း အဆီတွေလောင်နေတယ် !?
နေ့ခင်းအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာကို လှုပ်ရှားနေမှ ကိုယ်တွင်းအဆီတွေလောင်နေတယ်ဆိုထင်ရပင်မယ့်လည်း တကယ်တော့ အိပ်နေရင်းလည်း အဆီလောင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သိထားရမှာပါ။ အိပ်နေရင်း ဘယ်လောက်အဆီကျသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။
ဥပမာ- အသက် ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ၇ နာရီအိပ်နေချိန်မှာ ကာလိုရီက 390 Kcal လောက်အဆီကျနိုင်ပါတယ်။ အဓိက သတိထားရမှာကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ချင့်ချိန်နိုင်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
? အစားအသောက်ကို စားရင် ဗိုက်အပြည့်မစားဖို့၊ မအိပ်ခင် ၃ နာရီ အထိ အစားအသောက်တွေကို အကုန်ရပ်။
အိပ်နေချိန်မှာ ကာလိုရီ (အဆီလောင်တယ်)ဆိုပြီး ဘာစားစားအဆင်ပြေတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအသောက်ကို ချိင့်ချိန်လိုက်ရင် ကိုယ်လိုချင်သလို ဝိတ်ချနိုင်မှာပါ။ အမြဲတန်းစားနေသလို ဗိုက်အပြည့်စားချင်တယ်ဆိုတာကို ခဏလောက် သည်းခံလိုက်ပြီး ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်ပဲစားပါ။ စစချင်းမှာတော့ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရမှာပါ။ ဖြေးဖြေးချင်းအဆင်ပြေလာမှာပါ။ နောက်ပြီး မအိပ်ခင် ၃ နာရီမတိုင်ခင်အထိ အစားအသောက်တွေကို ပြီးအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစားချေချိန်က ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တာကြောင့်ပါ။
အိပ်နေချိန်မှာ အဆီကျစေအောင် အကူအညီပေးတဲ့ ဟိုမုန်းရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ပိန်စေတဲ့ ဟိုမုန်းပါ။ ဒီဟိုမုန်းက အလုပ်လုပ်ချိန်ကတော့ ည ၁၀ နာရီကနေ မနက် ၃ နာရီ အထိပါ။ ဒီအချိန်မှာ အိပ်နေရင်တော့ အဆီကျစေမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ အိပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
? အိပ်ချိန်ကို ၇ နာရီ - ၈ နာရီ ရှိရင် အကောင်းဆုံးပါ။
တနေ့ကို အိပ်ချိန် ၇ နာရီ - ၈ နာရီ ရှိအောင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ၇ နာရီမှာ ထဖို့ဆိုရင် ည ၁၂ နာရီလောက်မှာတော့ အိပ်သင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတာက လူကို ဝစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းပါ။ အပ်ရေးမဝချိန်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းက ဟော်မုန်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲစေပြီး စားချင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေတဲ့ ဟိုမုန်း Leptin ကိုလျော့နည်းစေပြီး တဖက်မှာ အရမ်းကို စားချင်အောင် လုပ်တဲ့ ဟိုမုန်း Ghrelin ကအလုပ်ပိုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကို အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ကနေ ၈ နာရီ အတွင်း အိပ်ဖြစ်အောင် အိပ်ပါ။
? အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ပါ။
မအိပ်ခင်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ အခန်းမီးကို ပိတ်ပြီး အခုအချိန်ကနေ အိပ်တော့မယ်ဆိုတာကို အသိပေးရမှာပါ။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ မအိပ်ခင် ၁ နာရီလောက်မှာ ရေချိုးလိုက်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ရေချိုးပြီးချိန်မှာ ခြေလက်တွေ ပူပူလေးဖြစ်နေချိန်က ပိုပြီး အိပ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး မအိပ်ခင် လက်ကို ဆုပ်လိုက်ဖြန့်လိုက် ၊ ခြေချင်းဝတ်ကိုလည်း လှုပ်ပေးရင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းလာပြီး အေးနေတဲ့ ခြေလက်လေးတွေ ပူနွေးလာမှာပါ။ ကဲ ဝိတ်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ပြောပြပြီးသွားပြီနော်။ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ သူတို့တွေရဲ့တာဝန်ပါ။